बलिउड अभिनेता जोनको नेपाली दर्शकलाई यस्तो अनुरोध ! – Ramailo Sandesh
बलिउड अभिनेता जोनको नेपाली दर्शकलाई यस्तो अनुरोध !
मुम्बई । बलिउड अभिनेता जोन अब्राहमले नेपाली दर्शकलाई एक अनुरोध गरेका छन् । जोनले उनको चलचित्र ‘मुम्बई सागा’ हलमा गएर हेरिदिन रिक्वेस्ट गरेका हुन् । सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो पोस्ट गर्दै उनले यस्तो अनुरोध गरेका हुन् ।
जोनले भनेका छन्, “नेपालका सबैलाई मेरो चलचित्र ‘मुम्बई सागा’ गएर हेरिदिन आग्रह गर्दछु । जुन मार्च १९ (भोलि) मा रिलिज हुँदै छ । यो ठूलो पर्दाका लागि बनेको चलचित्र हो । त्यसैले हलमा गएर यो चलचित्र हेरी मनोरञ्जन लिनुहोला । सबैमा मेरो प्रणाम ।” ट्रेलर हेर्नुहोस्
यो पनी पढ्नुहोस्ः गायन रियालिटी शो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’को तेस्रो सिजन आजदेखि..गायन रियालिटी शो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’को तेस्रो सिजन आजदेखि सुरु हुने भएको छ । यो सिजनको प्रतिस्पर्धामा १ सय २० जना प्रतियोगीले भाग लिँदै छन् । यो प्रतियोगिताको डिजिटल अडिसनमा ४० हजार जनाले आवेदन दिएको कार्यक्रम निर्देशक लक्ष्मण पौडेलले जानकारी दिए । ४० हजारबाट छानिएका १ सय २० जनाले शो को ब्लाइन्ड अडिसनमा भाग लिने छन् ।
ब्लाइन्ड अडिसनबाट हरेक कोचले छानेका १२÷१२ जना प्रतिस्पर्धीले ब्याटल राउन्डमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । शो को कोचका रुपमा दीप श्रेष्ठ, प्रमोद खरेल, राजु लामा र तृष्णा गुरुङ रहेका छन् । यसअघि कोच रहेकी आस्था राउतको ठाउँमा गुरुङको इन्ट्री भएको हो ।
कसरी घटाइन अनिताले पच्चीस केजी तौल ?
साउथका यी चर्चित सुपरस्टार संग छन ३६९ वटा कार – तस्बिरसहित